रेनु दाहालको अवस्था खतरामुक्त
दुर्घटनामा घाइते भएकी भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेनु दाहालको अवस्था खतरामुक्त रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
सिरियाको मानवीय अवस्था निकै नै गम्भीर रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय अधिकारीले यहाँको अवस्था दिनप्रतिदिन गम्भीर र निकै कमजोर बन्दै गएको भन्दै ती अधिकारीले यसका लागि विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन् । यहाँ पछिल्ला वर्षहरुमा आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै गएको र यही आर्थिक संकटकै समयमा राजनीतिक तथा अन्य अवस्था पनि नाजुक भएको उनको भनाई छ । मानवीय सहयातासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायका उपप्रमुख जोसे मुस्याले सो कुरा बताएका हुन् । यहाँ सन् २०११ बाट सुरु
अफगानिस्तानमा मानवीय अवस्था अझै गम्भीर
मस्को । अफगानिस्तानमा मानवीय अवस्था अझै गम्भीर रहेको रसियाली विदेश मन्त्रालयका मानव अधिकार आयुक्त ग्रिगोरी लुक्यान्त्सेभकाले बताएका छन् । आर्थिक सहायताको प्रावधानमा समस्याहरु रहेका पनि उनी स्थानीय सञ्चार माध्यमलाई बताएका छन् । अफगानिस्तानको अवस्था कसरी विकास हुनेछ भन्न गाह्रो भएको उनले बताएका छन् । सबैले अफगानिस्तानमा नयाँ अधिकारीहरूको कार्यलाई हेरिरहेका तर उनीहरुले आफ्नो आधिकारिक अन्तर्राष्ट्रिय […]
अब जनताको अवस्था बदल्नुपर्छ : विश्वप्रकाश शर्मा
कांग्रेसका नवनिर्वाचित महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अब व्यवस्था हैन अवस्था परिवर्तन गर्न जरुरी भएको बताएका छन् । कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनपछि झापाली कार्यकर्तालाई आभार प्रकट गर्न गृहजिल्ला आएका शर्माले जनताको अवस्था परिवर्तन...
कोरोना संक्रमण देखिएका नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको अस्पतालले जनाएको छ। बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरी अस्पतालले महामन्त्री खड्काको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको जानकारी दिएको हो। कोभिड संक्रमण भई...
नर्भिकका संस्थापक बसन्तकुमार चौधरीलाई दुबईमा हृदयघात भई अवस्था गम्भीर बनेको समाचार बाहिरिएपछि नर्भिकले अवस्था गम्भीर नभएको स्पष्ट पारेको छ।
दुर्गाप्रसादको अवस्था अझै सुध्रिएन
इलाम : ४ दशकभन्दा लामो समय भारतीय जेलमा बिताएका इलाम माई नगरपालिका–१० लुम्बकका ६१ वर्षीय दुर्गाप्रसाद तिम्सिनाको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रँदै गएको छ।चैत्र ८ गते घर फर्किएका दुर्गाप्रसादको पटक पटक स्वास्थ्य उपचार गरे पनि सुधार आउन सकिरहेको छैन। घर ल्याएपछि स्वास्थ्य अवस्था सुधार हुँदै आएको थियो। तर पछिल्लो केही सातादेखि स्वास्थ्य असामान्य बन्दै गएको उनका भतिज गोपाल तिम्सिनाले बताए।‘शारीरिक अवस्था ठिकै छ। चिकित्सकले बिस्तारै मानसिक अवस्था ठीक हुन्छ भनेका थिए। तर मानसिक अवस्था झनै बिग्रिँद
खनालको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य
काठमाडौँ । अस्वस्थ भई सोमबार (आज) विहान नर्भिक अस्पतालमा भर्ना भएका पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता झलनाथ खनालको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको अस्पतालले जनाएको छ । खनाललाई हाल आकस्मिक कक्षबाट वार्डमा सारिएको र अक्सिजन सपोर्टमा उपचार जारी राखिएको छ । खनालको अवस्था सामान्य रहेको र रगत जाँच गर्दा हेमोग्लोबिनको कमी देखिएको अस्पतालको सञ्चार तथा […]
काठमाण्डाै – विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ)ले नेपालमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको अवस्था चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको जनाएकाे छ । डब्ल्यूएचओका निर्देशक टेड्रोस अडनोम गेब्रियसले नेपालमा कोरोना महामारीको अवस्था चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको बताउनुभएको हो । निर्देशक गेब्रियसले भारतसँगै नेपाल, श्रीलङ्का, भियतनाम, थाइल्याण्ड लगायतका देशको अवस्था चिन्ताजनक भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग चाहिएको बताउनुभयो । नेपालमा अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने बिरामी बढिरहेको र उनीहरुको लागि बेड र अक्सिजन नै उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्था आएको भन्दै यसले अब थप...
काठमाडौं । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको अवस्था सामान्य रहेको नर्भिक अस्पतालले जनाएको छ । शनिबार नर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय अस्पताल भर्ना भएका शाहको अवस्था स्थिर रहेको अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र बहादुर सिंहले जानकारी दिए । यस्तै शाहसँगै अस्पताल भर्ना भएका पूर्वराजी कोमल, पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणाको अवस्था पनि सामान्य रहेको छ । शाहसहित ३ जनालाई डा. श्रीवास्तव र डा. जेपी जैसवालको टिमको निगरानीमा उपचार भइरहेको अस्पतालले जनाएको छ ।केही समय पहिले भारतको हरिद्वारमा कुम्भ मेलामा सामेल भ